Laba bantu awacatshangwa umbono womuntu, luhlaza futhi iluhlaza zase zizophela, base ulalele umculo ingubo babulawa, kungakhathaliseki ukuthi izinkambiso zokuziphatha. Sinenkosi kuphela izinkinga ekufundeni kanye zokuxhumana, kodwa futhi ezidakamizweni, otshwaleni, ukuziphatha okuxekethile kobulili. Laba bantu ngeke bephenduka ezenzweni zabo, futhi angaletha evamile umuntu ezanele ukuze ukuphazamiseka kwemizwa. Bona - zikhathazeke intsha.
Ngeshwa, imikhaya eminingi awazi mathupha ukuthi kunjani. Bezingosi intsha elinezinkathazo nzima yokuthi bengafuni ukulalela abazali, othisha kanye nabantu nje akazithelanga ngabandayo. Izintshumayelo kanye nemizamo ezidabukisayo ukuthonya lezi zingane kushabalele, futhi ungasingenisi neminye imiphumela. intsha Elinezinkinga zonke banemibono yabo, babekwa Angilwazi namahloni, futhi kuphela nezifiso zabo. Ngeshwa, ukulawula abazali babo, futhi hhayi ngendlela efanayo, njengoba kufanele ibe nomhlaba ophucukile. Kodwa kuze kube muva nje, lezi zingane zaba ukuziqhenya nokusekela kwabazali, base onothando futhi lunomusa, nobulungisa futhi zethembeke. Kungani lokhu ezimpilweni zabo nokuthi ukusebenza intsha nzima kungaletha okungenani eminye imiphumela?
Abazali ngokuvamile abaqapheli ukuthi banomthwalo wokuqinisekisa ukuthi ingane yabo enhle futhi cute ngokuzumayo yaphenduka isidalwa amoral. intsha Elinezinkinga babe ngakho kwasekuqaleni, ngenxa yamaphutha bakhulela. Lapho abazali, ethula izidingo ingane ukubamba eyodwa noma beqisa. Okusho ukuthi noma ake eziningi futhi asidingi, noma imvume okuphambene nalokho okuncane, kodwa zidinga kakhulu. Ngaphezu kwalokho, abazali kudingeka ziqonde ukuthi nengane ukubhekana sokuboshwa yobudala bakhe. + Ungacabangi kuba njalo encane futhi abazange basiqonde, noma omunye umuntu omdala abanolwazi.
Ngokuvamile omama nobaba ekuphishekeleni izinto ukufudumala kahle esabelweni kanye nobuhlobo obuhle, okuyinto elinde ingane. Kulokhu, lapho kwakungasekho okunye kodwa ukumkhafulela konke futhi wonke umuntu. Kuyinto qiniseka uhambisane kwezemfundo. Umndeni kufanele kube imithetho ecacile wokudumisa futhi kusolwa. Futhi umama nobaba kuhle ukukhuthaza umfuziselo imfundo, futhi musa ukhiphe ingubo ngayinye kokwakhe.
intsha Kunzima ufuna unakwe sabazali, lapho baye bancishwa, noma kunalokho wathola kakhulu kangangokuba manje abanazo zonke kancane kancane. Lezi zingane ukubonakala kwakhe lonke nokuziphatha ubonisa ukuthi anelungelo umbono wabo siqu futhi kuyindlela yokuphila.
Kuyinto engenakwenzeka azungeze izingane ukunakwa ngokweqile futhi enze izithombe nomndeni, futhi akusho ukuthi abanike sonke isikhathi, wamukelekile emndenini ubudlelwane esinenhlonipho cool. Ngokuvamile wahlupha intsha ufulathele umhlaba ngenxa ukungqubuzana njalo ekhaya, abazali kule ndaba ungayitholi ulimi olufanayo, bahlale awujabuli nomunye.
Izingane - kuyinto esibukweni amaphutha sabazali. Hudula ingane kudokotela wengqondo ngiyofuna futhi banethemba lokuthi ngolunye ukubhekana kangcono nale nkinga - akunangqondo ukudaza. Kudingeka siqaphele amaphutha azo bese ubukele ukuba sisebenzisane ukuze ubuyisele evamile, friendly futhi enenhlonipho ubudlelwane nezingane. Akunakusetshenziswa abakwazi shift wonke umthwalo ukuziphatha eyinkimbinkimbi ingane eyodwa kuphela. Ngokuvamile kunzima kakhulu ngiziphoqe ukuze bakholwe ukuthi indodana noma indodakazi yakho ibe mnyewu Hammami ukukhathaza ngenxa yamaphutha akho. Kepha njengoba masinyane njengoba ukuphatha ukwenza lokhu, uchwepheshe isazi sokusebenza kwengqondo uzokwazi ukulondoloza hhayi kuphela ngesikhathi eseyibhungu, kodwa futhi wonke umndeni wakho. Qiniseka ukuthi nochwepheshe, ungalindeli ukuthi ukunxusa wakho nezintshumayelo uzokwazi ukushintsha into. Shintsha ngokuyinhloko kwakudingeka eyisibonelo ubudlelwane emkhayeni, bese ukuxhumana phakathi kwabazali nezingane Kungenzeka baqotho, ngobuqotho futhi sithembeke.
Teen ukuzethemba kanye ubuhlobo baso komphakathi.